IDelivra yethula iwebhusayithi entsha | Martech Zone
Our imeyili marketing umxhasi, uDelivra, wethule iwebhusayithi entsha enhle namuhla, eyenzelwe futhi yathuthukiswa abanye abangane bethu abahle, I-SpinWeb, ku Inkululeko ye-Accrisoft. UDelivra ube ngumxhasi we Martech Zone izinyanga ezi-3, futhi sikuthandile ukusebenzisana naleli qembu elinikezelwe ngamakhasimende nelinolwazi olususelwe e-Indianapolis.
Ipulatifomu lokumaketha le-imeyili lakwaDelivra linikela ngezici ezahlukahlukene ezihambelana nezidingo zabakhangisi, abaphathi bezinga le-C, nabathuthukisi, kufaka phakathi ukuphathwa kohlu, umhleli weWYSIWYG, ukuhlukaniswa, ukwenziwa komuntu, ukulandelela nokubika, ukulethwa, API Ukuhlanganiswa, ukuhlanganiswa kwe-SMS, ukuphathwa kwe-Akhawunti, izinsizakalo ze-Design kanye nokubonisana.
Isayithi ligqame kakhulu kwamanye amaSoftware njengezindawo zeService, okunikeza umbono olula kumikhiqizo nokunikezwa kwensizakalo yeDelivra. Bayinkampani enkulu enedumela elimangalisayo lokwenza kahle kumakhasimende abo, futhi ukwakhiwa kwesayithi elisha kufana nobuntu babo obuthule, obuqinile nobuphumelelayo.
Chofoza esithombeni esingezansi ukuvakashela isayithi labo elisha elihle futhi ubanikeze ibhizinisi elithile!
Tags: delivraIsikhungo Sokumaketha nge-imeyiliUmxhumanisi Wezokumaketha nge-imeyiliUkuphathwa Kwe-imeyili OkuphethweIwebhusayithi entshaUkumaketha Kwe-imeyili OchwephesheUmxhasi